လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-R ကို စီးရီး လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuatသို့မဟုတ် ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် တွင် ဖြစ်စဉ် technology.Drived အားဖြင့် 380V / 220V / 110VAC သို့မဟုတ် 24V / 110VDC ပါဝါ, တွင်puts 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signal ကို, ရွေ့လျား အခင်အရှင် သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, နှင့် အောင်မြင်မှု သို့ auသို့matic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ အများဆုံး output ကို tသို့မဟုတ်que ဖြစ် 5000Nm.AOX-R ကို ကို စီးရီး လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuatသို့မဟုတ် တွေ့ဆုံ တွင်ternational stနှင့်ards နှင့် ဖြစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ၏ မြင့်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှု အသက် - tryတွင်g သို့ mတွင်imize maတွင်tenance လိုအပ်ချက်များ။ AOX အကောင်အထည်ဖေါ် အာမခံချက် လုံခွုံသော နှင့် စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုs အောက် အမျိုးမျိုးသော အစွန်းရောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွအေန။
AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက် 2. ပြင်ပ Module module: အ module တစ်ခု၏အာကာသတိုးပေးရန်က module ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေနှင့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝန်ဆောင်မှုဘဝရပါလိမ့်မယ်။
3. Relaible ဂီယာ: AOX-R ကိုစီးရီး Gear ကိုလျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator အထူးပစ္စည်းများကိုမြင့်နှင့်ပိုပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလျှပ်စစ် operated, ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရင့်ကျက် 60,000 AOX-R ကိုစီးရီးတစ်ခုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူလေးပုံတပုံအလှည့် actuator ရှိပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာတို့ပါဝင်သည်, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပစ္စည်းကိရိယာများကျော် 300 အစုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ, မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျမှန်ကန်မှုထံမှဝယ်ယူနေကြသည်။
ကျနော်တို့ AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်မည်, ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား။
Q: လေးပုံတပုံအလှည့် actuator AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုဝယ်စေချင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
မေး: သင် AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ဘို့မဆိုလျှော့စျေးပေးပါသလား
hot Tags:: လျှပ်စစ် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်